Live Wallpapers HD & Backgrounds 4k/3D - WALLOOP™ APK Download for Android
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » တိုက်ရိုက်နောက်ခံများ, HD & နောကျခံ 4k / 3D - WALLOOP ™
တိုက်ရိုက်နောက်ခံများ, HD & နောကျခံ 4k / 3D - WALLOOP ™ APK ကို
Walloop အခမဲ့အဘို့, အနိမ့်ကျထရီသုံးစွဲမှုနှင့်အတူတိုက်ရိုက်နောက်ခံများနှင့်နောက်ခံ HD ကို / 4K ၏ပထမဦးဆုံးစုစည်းဖြစ်ပါတယ်။
သင်တစ်ဦးတိုက်ရိုက် Wallpaper အဖြစ်သင့်ဗီဒီယိုများအသုံးပွုနိုငျ!
သင်အမြဲမျက်နှာပြင်သော့ခတ်ရန်အ home screen ကနေအရောင်နှင့်အတူသင့်ရဲ့ဖုန်းကိုစိတ်ကြိုက်အသစ်တစ်ခုခုကိုရှာတွေ့လိမ့်မည်!
🔹Walloop (နောက်ခံပုံများရွေ့လျား 3D အကျိုးသက်ရောက်မှုနောက်ခံပုံများနှင့်အတူ,) HD ကိုတိုက်ရိုက်နောက်ခံနဲ့ 4k နောက်ခံပုံများနှင့်ပင်မမျက်နှာပြင်နောက်ခံကြီးမားတဲ့စုဆောင်းခြင်းရှိပြီးမည်သည့်မိုဘိုင်းဖုန်းကိုထောက်ပံ့သောအခမဲ့ Android ကို Wallpaper App ကိုဖြစ်ပါတယ်။
သငျသညျအခမဲ့, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလင်းအတွင်း၌မြန်ဆန်ခြင်းနှင့် optimized စနစ် Store ကို Google Play တွင် HD ကိုနောက်ခံများရဲ့အကောင်းဆုံးနှင့်အများဆုံးဆန်းသစ်ရွေးချယ်ရေးရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။
🔹Walloop 4K Animated GIF များ, ဗီဒီယိုနှင့်ပိုပြီးနှင့်အတူ, သင့်ဖုန်းနောက်ခံပုံများ၏တစ်ဦးစုဆောင်းမှုဖြစ်ပါတယ် ...
▫️PREMIUMတဲ့ Live Wallpaper (high resolution ကတော့အတွက်ဟယ်လို, သူရဲကောင်းများသက်တံ့, နဂါးငွေ့တန်း, အာကာသ, ချစ်ခြင်း, ဂီတ, နှလုံး, deathly Hallows, စိန်, matrix, မီးရှူးမီးပန်းများ, နီယွန်, CPU, ဦးဆောင်, နီယွန်, ခရစ်စမတ်သစ်ပင်နှင့်အများကြီးပို)
▫️AMOLEDတဲ့ Live Wallpaper (အနိမ့်ကျထရီသုံးစွဲမှုနှင့်အတူပထမဦးဆုံးတိုက်ရိုက်နောက်ခံပုံများ, Full HD ကိုအများအပြား AMOLED တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှနောက်ခံပုံများ 3D)
▫️LIVE Wallpaper (သဘာဝတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှနောက်ခံပုံများ, မိုးတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှနောက်ခံပုံများ, anime တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှနောက်ခံပုံများ, ပင်လယ်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှဝေါလ်ပေပါ, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှနောက်ခံပုံ vaporwave, ကမ်းခြေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှနောက်ခံပုံများ, ရေတံခွန်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှနောက်ခံပုံများ, မြို့တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှနောက်ခံပုံများ, သစ်ပင်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှနောက်ခံပုံများ, နေရောင်တိုက်ရိုက်နောက်ခံပုံများ, ကြောင်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှနောက်ခံပုံများ, လိပ်ပြာတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ နောက်ခံပုံများ, စာအုပ်နှင့်ဖယောင်းတိုင်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှနောက်ခံပုံများ, ကြောင်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှနောက်ခံပုံများ, နီယွန်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှနောက်ခံပုံများ, မိုဃ်းတိမ်ကိုစီးနောက်ခံပုံများ, မိုးရွာရွာတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှနောက်ခံပုံများ, rotatin 3d တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှနောက်ခံပုံများ, စတင်နှင့်အတူကောင်းကင်ပြာနောက်ခံပုံများ, နဂါးငွေ့တန်းတိုက်ရိုက်ဝေါလ်ပေပါနှင့်များသောပိုပြီးအသက်ရှင်နေထိုင်အသက်ရှင်နေထိုင် !!!)
▫️FULL HD ကိုတဲ့ Live Wallpaper (ဖန် AMOLED နှင့်အတူမြင့်မားတဲ့ resolution ကိုရညျအသှေးတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှနောက်ခံပုံများ, pixels ကိုအသကျရှငျ, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှမှုန်ဝါး, လှိုင်းတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ ECC .. )
▫️ANIMEတဲ့ Live Wallpaper
abstraction & 3D ▫️
ဝေဟင်မှရှုမြင် (ကမ္ဘာမြေကြည့်ရန်, ဂြိုဟ်တု, မောင်းသူမဲ့လေ) ▫️
Blur & BOKEH ▫️
▫️သည်မှောင်မိုက် (Black ကနံရံကပ်စက္ကူ, အမှောင်နောက်ခံ)
KVANTUM PHANTAZY ▫️
▫️ Legend (အယ်, စူပါသူရဲကောင်းများ, TV စီးရီး)
SPACE & University ▫️
VAPORWAVE & ဆက်ကြောင်း▫️
▫️ CUTIE / KAWAII / ချစ်စရာတိုက်ရိုက်
သငျသညျအံ့သြဖွယ်အမြင်ဒီဇိုင်းနှင့် UI ကိုစတိုင်, အမြန်တင်နှင့်တစ်ဦး optimized preview ကိုရလိမ့်မယ်။
ယင်း App ကိုအပေါငျးတို့သနောက်ခံများကိုရှေးခယျြတနေဖြင့်တဦးတည်း filtered ပါပြီ။
အဆိုပါနောက်ခံများနှင့်သူတို့၏အရည်အသွေး - ငါတို့ရှိသမျှသည်ပိုလျှံဖယ်ရှားခြင်းနှင့် Essentials အာရုံစိုက်, သင်တို့အဘို့အပလီကေးရှင်းကြောင့်အဆင်ပြေပြေနဲ့ရိုးရှင်းတဲ့အောင်ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။
သင်တစ်ဦးဟာ android သို့မဟုတ် tablet ပေါ်မှဖုန်း screen ပေါ်တွင်နောက်ခံပုံသတ်မှတ်နိုင်သည်။ သင်တို့ကိုလည်းတခါမှာသော့ခတ်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်သို့မဟုတ်နှစ်ဦးစလုံးဖန်သားပြင်ပေါ်တွင်လှပသောငြိမ်နောက်ခံပုံများတပ်ဆင်နိုင်သည်။
သငျသညျ Whatsapp, Facebook, Twitter youtube ကနှင့်အခြားလူမှုရေးမီဒီယာအပေါ်လည်းသင်အကြိုက်ဆုံးနောက်ခံပုံများမျှဝေနိုင်ပါသည်။
2160 × 3840, 1440 × 2560, 1080 × 1920, 720 × 1280, 540 × 960, 480 × 800 နှင့်အခြား Android ကိုခွင့်ပြုချက်: အားလုံးလူကြိုက်အများဆုံးခွင့်ပြုချက်အဘို့အ optimized ပုံများ။
အောက်ပါထုတ်လုပ်သူများ၏ထုတ်ကုန်များ၏ app ကိုထောက်ခံမှုဖန်သားပြင်: Samsung က, Sony, LG, Lenovo က HTC, ASUS က, Alcatel, Huawei Meizu Xiaomi သည်နှင့်အခြားသူများ။
ဒါဟာဘယ်လောက်ရှိသလဲ ကျေးဇူးပြု. ! ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့တုံ့ပြန်ချက် app ကိုတိုးတက်စေပါလိမ့်မယ်။
တိုက်ရိုက်နောက်ခံများ, HD & နောကျခံ 4k / 3D - WALLOOP ™
5.84 ကို MB